Tag: kushambadzira kwezvivakwa | Martech Zone
Tag: kushambadzira kwezvivakwa
Kutenga chivakwa, imba, kana kondomu chinhu chakakosha kudyara… uye kazhinji zvinongoitika kamwe chete muhupenyu hwese. Zvivakwa zvekutenga zvivakwa zvinokurudzirwa neakawanda eanopokana manzwiro - saka pane zvakawanda zvinoda kutariswa pakugadzira webhusaiti yezvivakwa inovabatsira parwendo rwekutenga. Basa rako, seagent kana real estate broker, kunzwisisa manzwiro uchivatungamira kune zvine musoro uye
Patakavaka Agent Sauce inosanganisa nzvimbo, IDX kusangana, marwendo, nharembozha, mavhidhiyo mafambiro, email kushambadzira, mameseji eSMS uye kudhinda, isu takaziva kuti kushambadzira zvemukati ndiko kwakakosha kutyaira kwakawanda kutengesa kune vamiririri. Uye, hazvishamise, vamiririri vedu vanoshandisa chikuva vanoona zvizere mhinduro huru uye nemitengo yepedyo. Zvemukati zvekushambadzira hazvisi zvekungotaura buzzword kana imwe isina kuvhurwa, yekuyedza kushambadzira zano: inoshanda chaizvo. Muchokwadi, kushambadzira kwemukati kwakaratidzirwa kuburitsa angangoita
Mugovera, Kukadzi 20, 2010 Svondo, October 4, 2015 Adam Mudiki
Doug ataurwa mune ichangoburwa positi kusunganidzwa kwakasimba uye otomatiki ichave kiyi kune vatengesi veemail. Isu tinoshanda nevamiriri veReal Estate uye ndizvo chaizvo zvavari kuda. Zvinhu zvakati wandei zvaunofanira kuziva nezve real estate: Real Estate vamiririri havazi tekinoroji uye havana IT department yekufona kana vachida rubatsiro. Ivo vatengesi, vanokurumidza kutora matekinoroji, uye vanogara vachiyera kukanganisa. Ivo vanowanzo kuve vashambadzi vane hunyanzvi -